गौतम बुद्धका ५ अनमोल वचन, तपाईँलाई कति उपयोगी ? – Sapana Sanjal
June 30, 2021 216
Sapana Sanjal : भगवान गौतम बुद्धले बौद्ध धर्मको प्रवर्तन गरेका थिए । बुद्धको अहिंसा र करुणाको सिद्धान्तले सम्राट अशोकलाई यतिधेरै आर्कषित गरेको थियो कि उनले यसबाट प्रभावित भई बौद्ध मतलाई स्वीकार गरे युद्धमा रोक लगाएका थिए ।
Prevको कुन प्रकारको “व्यक्ति” हो भन्ने कसरी जान्ने ?
Nextकाँग्रेस नेता भण्डारीले रुपन्देहीमा कार दुर्घटना हुदा गुमाए डाक्टर भाई